Hobbies that will make Smarter
Home / Hobbies that will make Smarter
“No man is really happy or safe withoutahobby.” ဆိုတဲ့ စကားလိုပါပဲ။
“ဝါသနာ” ဆိုတာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ထွက်ပေါက် တစ်ခုပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ အားလုံးမှာ အားလပ်ချိန်တွေကို ပျော်ရွှင်စွာ ကုန်ဆုံးစေနိုင်မယ့် အလေ့အကျင့်တစ်ခု အဖြစ် နှစ်သက်ရတဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဝါသနာတွေ ရှိကြစမြဲပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့် ဝါသနာလို့ဆိုရာမှာ ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေ ရရှိနိုင်တဲ့ ဝါသနာ၊ ကိုယ်ခန္ဓာ ကျန်းမာ ကြံ့ခိုင်စေမယ့် ဝါသနာနဲ့ ထက်ထက်မြက်မြက် ဖန်တီးနိုင်စွမ်း ကောင်းမွန်လာနိုင်တဲ့ ဝါသနာဆိုပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် ခွဲခြားနိုင်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ဆိုတော့ လက်ရှိ အားလပ်ချိန်တွေမှာ ဘယ်လို ဝါသနာမျိုးတွေနဲ့ နေနေကြတာလဲ? ဂိမ်းဆော့တာလား? Social Media တွေပေါ်မှာပဲ ကုန်ဆုံးနေတတ်တာလား? အားကစားလုပ်ကြတာလား? ကိုယ်တိုင် သဘောတကျနဲ့ အမြဲလိုလို လုပ်နေတတ်တဲ့ ဝါသနာမျိုးက ကျွန်တော်တို့ အတွက် ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးမျိုးတွေ ပေးနေသလဲ?
ဝါသနာ အမျိုးအစား အများကြီး တွေထဲကမှ ဘ၀ အတွက် အထောက်အကူပြု နိုင်စေမယ့် ဝါသနာ မျိူး ရှိနေခြင်းက ကိုယ့်အတွက် ပိုပြီး အကျိုးရှိစေနိုင်တာမို့ ဒီနေ့မှာတော့ ဘယ်လို ဝါသနာရပ်မျိူးတွေ ရှိနေတဲ့အခါ ကိုယ့်ဘဝအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်မလဲ ဆိုတာ ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် စာလို့ ထင်ရင် ဘယ်လို စာပေ အမျိုးအစားမျိုးကို မဆို ဖတ်သင့်ပါတယ်။ စာပေ အမျိူးအစား အစုံအလင်ကို ဖတ်ရှုလေ့လာတတ်သူတွေက Crystalised, Fluid နဲ့ Emotional လို့ခေါ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ Intelligence ပိုင်းမှာ ပိုမို တိုးတက်စေလာနိုင်တဲ့အပြင် Problem Solving Skill ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ သိတတ်စေလာနိုင်ပြီး ကိုယ်ဖတ်ရှုလေ့လာထားတဲ့ အသိပညာ ဗဟုသုတပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို နေ့စဉ် လူနေမှုဘဝမှာ လက်တွေ့ အသုံးချ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပြီး လူ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လိုက်လျော ကိုက်ညီစွာနေထိုင်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ စာဖတ်ရှုလေ့လာခြင်းက လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ Personality နဲ့ Attitude မှ စလို့ Self-Development အထိ များစွာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ပေးနိုင်တာမို့ သင်က စာဖတ်တာကို ဝါသနာပါသူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ဘဝအတွက် အကောင်းဆုံးသော ဝါသနာတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
တူရိယာတွေ လေ့ကျင့်သင့်ကြားခြင်းက Creativity, Analytical Skills တွေအပြင် Eye-Hand Coordination နဲ့ Fine-Motor Skill ကို များစွာ တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီလို တူရိယာတွေလေ့ကျင့်ခြင်းကို ဝါသနာ တစ်ရပ်အနေနဲ့ ရှိတတ်တဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ IQ Level လည်း တစတစ ပိုမို မြင့်မားလာလေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဆိုတော့ သင်က ဂီတကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ Smart ဖြစ်စေမယ့် ဒီလို ဝါသနာမျိုးကို ရွေးချယ် လေ့ကျင့်ကြည့်ဖို့ အကြံပေးပါရစေ။
ပုံမှန် အားကစားလုပ်နေသူတွေက သာမန်လူတွေထက် မှတ်ဉာဏ်စွမ်းအား ပိုမို ကောင်းမွန်လာပြီး စာသင်ကြားလေ့လာရမှာ သဘောပေါက်လွယ်တယ်၊ အာရုံစူးစိုက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာနိုင်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အချိန်အကြာကြီး စာကြည့်စားပွဲမှာ ထိုင်ပြီး တကုပ်ကုပ် စာလုပ်နေသူထက် ဒီလို ပုံမှန်အားကစားလုပ်သူတွေက စာလေ့လာသင်ကြားရာမှာ ပိုမို လွယ်ကူစွာ သင်ယူနိုင်တယ်လို့ သုတေသီတွေက ဆိုကြတာမို့ သင့်အနေနဲ့ စာကြည့်စားပွဲမှာ အချိန်ကြာမြင့်စွာ စာကြည့်ရမှာ မုန်းတယ်ဆိုရင်တော့ ဝါသနာအဖြစ် ပုံမှန်အားကစားပြုလုပ်ရင်း Learning Method Style အသစ် ပြောင်းလဲ လေ့ကျင့်နိုင်ပါပြီ။
ဒါက ဝါသနာလားလို့ ဆိုရင် ဟုတ်တယ်လို့ ပြောရမှာပါပဲ။ မိခင် ဘာသာစကားမဟုတ်တဲ့ ဘာသာစကားအသစ်ကို လေ့လာဖို့ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ကလည်း စိတ်ဝင်တစားနဲ့ အသစ်အဆန်းတွေကို လေ့လာလိုတဲ့ ဝါသနာရှိမှ ဖြစ်မှုာမို့လို့ပါ။ Bilingual ဖြစ်သူတွေက ဘာသာစကားတစ်မျိုးထဲ တတ်သူတွေထက် Puzzle တွေ ဖြေရှင်းရမှာ တော်ကြတယ်လို့ သုတေသန အချက်အလက်တွေမှာတွေ့ဖူးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အနည်းဆုံး ဘာသာစကား နှစ်မျိုးလောက်ကို လေ့လာသင်ကြားထားသူတစ်ယောက်အတွက် ဘယ်လို အပြောင်းအလဲ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ တွေ့ဆုံပါစေ ယုံကြည်ချက် အပြည့်အ၀ ရှိနေပြီး Planning & Problem-Solving ပိုင်းတွေမှာပါ တော်သူတွေ ဖြစ်ကြောင်းတွေ့နိုင်ပါတယ်တဲ့။ ဒီတော့ သင်က ဘာသာစကား အသစ်တွေကို လေ့လာရတာ သဘောကျသူ တစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ဒီ ဝါသနာကနေတဆင့် သင့်ရဲ့ Personal Development တွေ Career Development တွေ အတွက် အကျိုးများစွာ ရှိနေစေနိုင်မှာပါ။
သစ်ပင်ပန်းမန်လေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းက Stress Hormone တွေကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မျိုးစေ့လေးတွေက တဆင့် ကိုယ်တိုင်ပြုစု ပျိုးထောင်ထားတဲ့ ပန်းပွင့် အသီးအနှံ အပင်လေးတွေ ပေါက်ဖွားရှင်သန်လာတာကို တယုတယ စိုက်ပျိုးတတ်သူတွေရဲ့ ဝါသနာက တဆင့် လောကကြီးကို အကောင်းဘက်က မြင်ပေးနိုင်စွမ်း ပိုမို မြင့်မားလာစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စိတ်ရောကိုယ်ပါ စာထဲမှာ နှစ်ထားရတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက် စိမ်းလန်းစိုပြေပြီး အရောင်အသွေး စုံလင်တဲ့သစ်ပင်ပန်းမန်လေးတွေကို ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့် စိတ်အာရုံနဲ့ ဦးနှောက်ကို လန်းဆန်း တက်ကြွ စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ .
ဦးနှောက်ကို အလုပ်ပေးတဲ့ ဂိမ်းမျိုးတွေ ဆော့ပါ။
သင်က Game Crazy တစ်ဦးဆိုရင် ဦးနှောက်သုံးရတဲ့ Video Game နဲ့ Card Game မျိုးတွေ ဆော့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားအများစုနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ Chess, Sudoku, Puzzles, Riddles စတဲ့ ဂိမ်းမျိုးတွေ ဆော့လို့ရပါတယ်။ ဒီလို ဦးနှောက်သုံးရတဲ့ ဂိမ်းမျိုးတွေ ဆော့ခြင်းအား ဖြင့် ဦးနှောက်အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ Nerve Cells တွေက ပုံစံ အသစ်အဆန်းနဲ့ တုံပြန့်စဉ်းစားလာရပြီး အကြောင်းအရာအသစ်အဆန်းတွေ အပြူအမူတွေ ကို အများနဲ့မတူတဲ့ ရှုထောင့် အသစ်အဆန်းကနေ စဉ်းစားတွေးခေါ်စေနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်လည်း တိုးတက်လာနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီလို ဂိမ်းမျိုးတွေကို ဆော့လေ့ရှိတဲ့ Gamer အများစုက smart ဖြစ်ကြတယ်လို့ အများစုက လက်ခံထားကြတာပါ။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဝါသနာ ဆိုတာက စိတ်ထွက်ပေါက် ပျော်ရွှင်မှု တစ်ခု ဆိုတာထက် ပိုပါတယ်။
ဘဝမှာ အမှန်တကယ် ပျော်ရွှင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုတာ သူ့ရဲ့ ဝါသနာ နဲ့အတူ အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်တဲ့ လူမျိုးလို့တောင် ဆိုစမှတ်ပြုကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကိုယ်ချစ်တဲ့ ဝါသနာ ရပ်ကို ရွေးချယ်ပါ။ ကိုယ့်အတွက် အကျိုး ရှိစေမယ့် ဝါသနာ အမျိုးအစားကို လေ့ကျင့်ယူပါ။
ဘဝကို ပျော်ရွှင် အောင်မြင်စွာ ဖြတ်သန်းလိုက်ပါ။